Shiinaha Shiinaha Customized boorsada boorsada-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada kumbuyuutarka > Boorsada kombiyuutarka Mudanayaal
1. Hordhaca alaabada boorsada kombiyuutarka dumarka:
(1) Dharka kore ee boorsada kumbuyuutarka ee haweenku wuxuu ka samaysan yahay maro nayloon aan biyuhu lahayn oo Oxford maro ah. Maadadani waxay leedahay xoog silibid adag. Tiknoolajiyadeeda dharka ee gaarka ah ayaa ka dhigaysa mid aad u adag oo u adkeysata, cufnaanta dharka sare iyo daahan biyuhu. Waxay si wax ku ool ah uga hortagi kartaa biyaha roobka inay ku ridaan bacda. Isku darka tikniyoolajiyadda dharka badan leh iyo dahaadhka biyuhu waxay ka dhigayaan inay yeeshaan waxqabad wanaagsan oo aan biyuhu lahayn, waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4.
(2) Dahaarka gudaha wuxuu ka samaysan yahay 210D nylon oxford maro oo leh dhalaal dhalaalaya. Qalabkan waxaa badanaa loo isticmaalaa dahaadhka gudaha ee boorsooyin badan. Sida laga soo xigtay baaritaanka xogta, maaddadani waxay leedahay kalsooni aad u sarreeya.
(3) Jiinyeerka alaabtu waa qaybta ugu muhiimsan, tayada alaabta jiinyeerkuna waxay go’aamisaa heerka wax soo saarka, sidaa darteed boorsooyinka kumbuyuutarradeena haweenku waxay adeegsadaan jiinyeerka YKK ee aadka loo yaqaan iyo sumcadda caanka ah ee Shiinaha ee SBS.
(5) Boorsadeena laptop-ka ee dumarka waa neefsasho, adkeysi xir, biyo celin iyo yareyn xamuul, waxayna qaadi kartaa laptop 15.6 inji ah iyo qalab dhinac ah.
(6) Dusha sare ee boorsada kumbuyuutarka ee marwadayadu waxay ka samaysan tahay walxo u adkaysta xoqida, taas oo si wax ku ool ah uga ilaalin karta bacda inay xoqdo walxaha fiiqan oo ay ku sii hayaan bacda oo dhan qurux.
(7) Shandaddan kumbuyuutarka ee boorsada ah waxay qaadatay tiknoolajiyad ka dhan ah xatooyada waxayna ku qalabeysan tahay furaha koodhka, kaas oo si wax ku ool ah uga hortagi kara in bacda si fudud loo furo, isla markaana si wax ku ool ah uga hortagi karto marka aad joogto meelaha dadku isugu yimaadaan sida saldhigyada basaska. , saldhigyada tareenka, garoomada diyaaradaha ama dadka camiran. Khatarta waxyaabaha muhiimka ah ee la xado.
(9) Waxaan sidoo kale iswaafajinay boorsadan laptop-ka ladagaalanka xatooyada ah ee maqaarka microfiber PU maqaarka ufiican si looga dhigo mid heer sare ah. Inbadan oo la jaanqaadaysa dabeecad ganacsi.
2. Boorsada kombiyuutarka Mudanayaal product parameters (specifications)
Naylon Oxford oo aan biyuhu qorin
Dhererka 29cmX Width 12cmX Dhererka 42cm
3. Astaamaha iyo codsiyada boorsooyinka kumbuyuutarka dumarka
(1) Boorsadan kumbuyuutarka ah ee dumarku waxay leedahay astaamo biyo-diid ah, xoqida u adkaysata, yareynta culeyska, naxdinta-nuugista, adkaysiga u adkaysta, nolosha adeegga dheer, iyo shaqooyinka badan.
(3) Waxaad u adeegsan kartaa boorsada kumbuyuutarka marwada si aad si fudud ugu keydiso laptop-kaaga shaqada iyo qalabka agabyada, sida kiiboodhka, jiirka, U diskiga, moobilka moobaylka, iwm.
(5) Waxaan ku qalabeynay boorsada kumbuyuutarka haweeneydan kumbuyuutar kumbuyuutar kumbuyuutar, kaas oo si wax ku ool ah uga ilaalin kara waxyaabahaaga muhiimka ah in laga xado goobaha dadweynaha.
(6) Marka labaad, boorsadani waxay leedahay naqshad deeqsinimo iyo moodo leh, oo ku habboon dhammaan dadka waaweyn.
(7) Boorsadaan kumbuyuutarka ah ee dumarka waxay ku qalabeysan tahay dalool banaanka laga soo buuxin karo, kaas oo ka qaadi kara taleefanka gacanta waqti kasta iyo meel kasta oo aad socoto. Si kastaba ha noqotee, isticmaaluhu wuxuu u baahan yahay inuu dhigo korantada korontada moobiilka booska ku habboon boorsada. Isticmaalayaashu waxay dooran karaan inay iswaafajiyaan korontada iyaga laftooda, haddii kale, waxaan ku siin karnaa awood moobiil polymer ah.
5. Baakadaha iyo rarka boorsooyinka kumbiyuutarka dumarka
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 48cm X 34cm X 13cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(6) Haddii loo baahdo, waxaan qaabeyn doonnaa habka baakadaha ee boorsada kumbuyuutarka marwada si waafaqsan shuruudahaaga.
A: <= 1000USD, 100% bixinta kahor,> = 1000USD, 30% T / T kahor, 70% D / P shixnad.
Calaamadaha kulul: Boorsada kumbuyuutarka ee Mudanayaal, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka